Ndịàmà Jehova nọ́ na Yurop
Ịngland: Ebe ụmụnna anyị ji obi ụtọ na-anabata ụmụnna anyị ndị si mba ọzọ bịa mgbakọ mba niile
MBA OLE DỊ NA YA 47
MMADỤ OLE BI NA HA 743,421,605
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 1,614,244
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 842,091
E Mechara Mụwara Onye E Chere Bụ́ Nwanna Nwaanyị Baịbụl
Mgbakọ mba niile e nwere na Lọndọn, dị́ n’Ịngland, tọrọ ụmụnna nọ n’Ịngland ụtọ, tọọkwa ụmụnna ndị si mba ọzọ bịa ụtọ. Ụmụnna anyị aha ha bụ Andrew na Elizabeth gara n’otu họtel dị́ na Lọndọn ka ha kelee ụmụnna anyị ndị si mba ọzọ. Mgbe ha ruru, ha hụrụ otu nwaanyị jikeere nke ọma n’ebe a na-anabata ndị ọbịa ma chee na ọ bụ otu n’ime ụmụnna anyị ndị si mba ọzọ bịa. Elizabeth gara makụọ ya nke ọma. Ihe a Elizabeth mere juru nwaanyị ahụ anya. N’ihi ya, Elizabeth sịrị ya ewela iwe na ya chere na ọ bụ otu n’ime ndị si mba ọzọ bịa mgbakọ a.
Nwaanyị ahụ jụrụ ya, sị, “Mgbakọ gịnị?”
Elizabeth tụụrụ ya aka n’ebe e dere ihe n’ebe ahụ e ji anabata Ndịàmà Jehova bịara mgbakọ ahụ. Ihe nwaanyị ahụ kwuziri tọrọ Elizabeth ụtọ. Ọ sịrị: “Nke ahụ amaka. M̀ dị ka onye bịara mgbakọ a?”
Mgbe nwaanyị ahụ na Elizabeth na-akparịta ụka, Elizabeth chọpụtara na aha ya bụ Vivien, na ọ bụ onye Naịjirịa, nakwa na ọ bụ onye agbata obi ya. Mgbe ọ gwara Vivien ka ha na-amụ Baịbụl, o kwetara. Vivien chọkwara ka ụmụ ya soro ha na-amụ Baịbụl. Mgbe Andrew na Elizabeth mechara gaa n’ụlọ ya, ọ makụrụ ha nke ọma. Otú ha si mata onwe ha na họtel ahụ tọrọ Vivien ụtọ. Mgbe Andrew na Elizabeth gosiri ya akwụkwọ Bible Na-akụzi, ọ gwara ha na ya nwere ya nakwa na ya na ụmụ ya anọ na-amụ ya. Mgbe ha gwara ya na a na-ejikwa akwụkwọ a amụrụ ndị mmadụ Baịbụl n’anaghị ha ego, obi tọrọ ya ụtọ, ya asị ka ha malite ozugbo.
Akwụkwọ Ozi Otu Nwanna Onye Roma Dere
N’ọnwa Nọvemba afọ 2014, e hiwere ọgbakọ mbụ na-eji asụsụ Romany amụ ihe na Slovakịa. Ná mgbakọ sekit e nwere n’oge na-adịbeghị anya, e mere ndị nkwusa iri abụọ na otu bụ́ ndị Roma baptizim. Ha niile si n’otu obodo. Mgbe e mere Ncheta Ọnwụ Jizọs, ndị bịara ya n’ọgbakọ Roma dị narị mmadụ anọ na iri itoolu na ise. Otu nwanna nwoke e mere baptizim n’oge na-adịbeghị anya dere, sị:
Slovakịa: Ebe ụmụnna abụọ ji obi ụtọ na-ezi nwaanyị onye Roma ozi ọma
“Abụ m onye Roma. M bi na Zera dị́ na Slovakịa. N’ebe m bi, ndị ọcha na-ele anyị anya ka ndị na-anaghị ebi otu ebe. Ha na-eche na anyị na-eru unyi, na-agha ụgha, ma na-ezu ohi. Mgbe m gara chọọchị, onye na-elekọta chọọchị ahụ gwara m laa na mụ ekwesịghị ịbịa ebe ahụ. Ụdị ihe a mere ka m na-ele ndị ọcha anya ọjọọ. Mgbe e mechara, Ndịàmà Jehova gwara m bịa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze. M gara, ọ bụ eziokwu na m tụrụ anya na ha ga-asịkwa m laa. Ma tupu mụ abanye n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ahụ, onye ọcha bịara kwee m n’aka ma nabata m nke ọma. Ihe a o mere tụrụ m n’anya. Mgbe a na-ekwu okwu ihu ọha, uche m adịghị n’ihe a na-ekwu. Ihe m nọ na-eche bụ ihe mere onye ọ bụla ji nabata m nke ọma.
“N’abalị ahụ, ụra agaghị m n’anya n’ihi na m nọ na-eche gbasara ihe mere n’ọmụmụ ihe ahụ m gara. N’ihi ya, m kpebiri na m ga-aga ọmụmụ ihe ahụ ọzọ ka m mara ma ò mere ná ndaba. Mgbe m gara, ndị m hụrụ ebe ahụ nabatara m nke ọma karịa n’oge mbụ. Ha mere nnọọ ka à ga-asị na ọ dịla anya mụ na ha matara. Kemgbe ahụ, akwụsịbeghị m ịga ọmụmụ ihe, e mechakwara mee m baptizim. Mgbe e mechara m baptizim, otú ụmụnna si emeso m agbanwebeghị. Ha ka na-egosi na ha hụrụ m n’anya. Mgbe ụfọdụ, ha na-enye m nri ka nke hanwa na-eri mma. Achọghị m ịhapụ ọgbakọ a. Ọ bụkwa Jehova bụ́ Chineke ka m chọrọ ife ruo mgbe ebighị ebi.”
A Zara Ekpere O Kpere Ka O Zie Mmadụ Ozi Ọma
N’Azebaịjan, e nwere otu nwanna nwaanyị aha ya bụ Aysel. Ọ banyere bọs sí n’obodo Ganja na-aga Baku. Aysel kpegaara Jehova ekpere ka o mee ka ya zie mmadụ ozi ọma na bọs ahụ. N’agbanyeghị na e nyela ya oche ọ ga-anọ, otu nwaanyị siri ọnwụ ka ọ bịa soro ya nọrọ. Aysel na nwaanyị ahụ malitere ịkparịta ụka. O jikwa nwayọọ gwawazie ya ihe Baịbụl kwuru gbasara ihe ha na-ekwurịta. Nwaanyị ahụ kwuru na ya hụrụ Jizọs n’anya, chọọkwa ịmatakwu banyere ya. Aysel nyere ya nọmba ekwentị ya, ya enyekwa Aysel nke ya. Ha yikwara agba mgbe ha ga-ahụ ọzọ. Ọ gwara Aysel ka o wetara ya Baịbụl ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Mgbe Aysel laghachiri Ganja, ọ gara n’ebe nwaanyị ahụ na-arụ ọrụ. Nwaanyị ahụ gwara ya na ya nwere akwụkwọ ekpere ya na-agụ kwa ụbọchị. O juru Aysel anya mgbe ọ chọpụtara na akwụkwọ ekpere ahụ bụ akwụkwọ Inyocha Akwụkwọ Nsọ Kwa Ụbọchị nke afọ 2013. Aysel na nwaanyị ahụ malitere ịmụ Baịbụl. Obi tọrọ ya ụtọ na Jehova nyeere ya aka ịkata obi zie mmadụ ozi ọma na bọs.
Akwụkwọ Ozi Ekele Onye Mkpọrọ Detara
Otu onye sí Spen dere akwụkwọ ozi a. Ọ sịrị:
“M chọrọ ibu ụzọ kelee unu maka mbọ unu na-agba iji Baịbụl zie ụdị mmadụ dị iche iche ozi ọma.
“Mgbe mbụ Ndịàmà Jehova ziri m ozi ọma bụ afọ iri na ise gara aga mgbe m nọ na Tirani, dị́ n’Albenia. O juru m anya na Onyeàmà Jehova katara obi bịakwute mụ na ndị òtù m dị́ mmadụ iri. O nweghị onye na-anwa anwa agwa anyị okwu. Ma nwanna ahụ mere otú ahụ n’agbanyeghị na anyị ji ngwá ọgụ. Ọ gwara anyị ihe Baịbụl kwuru. Otú o si kata obi gwa anyị okwu masịrị m.
“N’afọ anọ gara aga na Spen a, otu Onyeàmà Jehova bịara zie m ozi ọma n’ụlọ mkpọrọ ma gwa m ka anyị mụwa Baịbụl. M kwetara. Kemgbe ahụkwa, àgwà m akala mma. Akwụsịla m ime ihe ike na ime ara ara. Kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, abanyebeghị m ná nsogbu. Amarala m onye Jehova bụ, nke a emeekwala ka ndụ m nwee isi. M na-agbalịsi ike ka mụ na ndị mmadụ dịrị n’udo. Ọ karịakwala otu afọ m ghọrọ onye nkwusa a na-emebeghị baptizim.
“Anọọla m afọ iri na abụọ ugbu a n’ụlọ mkpọrọ, ma kemgbe afọ anọ gara aga, obi eruola m ala otú ọ na-erutụbeghị m. M na-ekele Jehova kwa ụbọchị maka ya.
“N’izu ole na ole gara aga, elere m vidio ụfọdụ dị na jw.org. Mgbe m lere nke kwuru gbasara otu nwanna nwoke a tụburu mkpọrọ n’Amerịka, o ruru m n’ahụ́. Ọ na-esi ike anya mmiri ịgba m ma ihe mee, ma mgbe m hụrụ mgbanwe ndị o mere ná ndụ ya, anya mmiri gbara m.
“Ka Jehova na-agọzi mbọ unu na-agba iji asụsụ dị iche iche na-ezi ndị mmadụ ozi ọma nakwa ileta anyịnwa nọ n’ụlọ mkpọrọ.
“Unu emeela nke ukwuu.”
“Ugbu A, Obi Eruola M Ala”
E nwere ihe otu nwaanyị bi na Swidin kwuru. Aha ya bụ Felicity, ọ dịkwa afọ iri isii na asatọ. Ọ sịrị: “Kemgbe ụwa, ọ na-adị m ka ndụ m abaghị uru. M nọkwa na-achọ ka obi ruo m ala, ma o nweghị isi.” Ihe a na-akụziri ya na chọọchị Katọlik emeghịkwa ka obi ruo ya ala. N’ihi ya, o bidoro ịmụ gbasara ihe okpukpe ndị ọzọ na-akụzi. O mechakwara tinye aka n’ime mgbaasị.
Ebe ọ na-amaghị isi ndụ ọ dị, ndụ ya gbụrụ ya nke na ọ chọrọ igbu onwe ya. Ọ sịrị: “Eji m anya mmiri kpegara Chineke ekpere n’olu dara ụda, na-arịọ ya ka ọ gwa m ihe ọ chọrọ ka m mee. Mgbe izu abụọ gachara, otu nwa okorobịa kụrụ aka n’ụzọ m. Ọ mụmụụrụ m ọnụ ọchị ma jụọ m ma m̀ chọrọ ịnụ Okwu Chineke. M kwuru n’ime obi m, sị, ‘Chineke mbanụ, ọ bụghị Ndịàmà Jehova ka m sịrị gị zitere m.’”
Ọ bụ eziokwu na ihe gbatara Felicity n’obi ozugbo bụ imechi ụzọ, o gere ya ntị ma kweta ka ya na ya jiri akwụkwọ Bible Na-akụzi na-amụ ihe. Felicity sịrị: “Akwụkwọ ahụ mere ka m ghọtakwuo Baịbụl.” E mere ya baptizim ná mgbakọ ukwu e nwere na Swidin n’afọ 2014. O kwuru, sị: “Kemgbe ụwa, m nọ na-achọ otú obi ga-esi ruo m ala, ma ugbu a, obi eruola m ala.”
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Yurop
Nke na-enweghị foto Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016
Nke a na-egere egere Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016